Hoggaamiyeyaasha Eritrea iyo Itoobiya Oo soo Afjaray Colaaddii Xadka Kala Saxeexdayna Heshiiyo..(Sawiro) | Awdalmedia.com
Hoggaamiyeyaasha Eritrea iyo Itoobiya Oo soo Afjaray Colaaddii Xadka Kala Saxeexdayna Heshiiyo..(Sawiro)
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afewerki ayaa kala saxiixday heshiis wadajir ah oo ku salaysan nabadda iyo xiriir saaxibtinimo, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta dalka Eritrea.
Sidoo kale heshiiska ayaa lagu xusay inuu soo afjarmay dagaalkii uu dhexeeyay labada dal
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaia Afwerki ayaa ku heshiiyay in dib boorka looga jafo xiriirka Diblumaasiyadeed iyo midka ganacsi ee labada wadan u dhaxeeyay.
Hogaamiyaasha Labada dal ayaa sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen in dib loo bilaabo khadadkii taleefoonada iyo duullimaadyadii tooska ahaa ee isaga kala gooshi jiray labada wadan .
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay inay sidoo kale ku heshiyeen labada wadan in midba dalka kale uu ka furto safaarad, waxa kale uu xusay in dowladda Eritrea ay u oggolaatay inay adeegsadaan dekedaha dalkaasi.
Safarkii shalay dalka Eritrea ku tagay Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ahaa mid taariikhi ah, waxa uuna noqday Ra’isul Wasaaraha Isbadal doonka ah masuulkii ugu sareeyay oo ka socda dowlada Itoobiya ee taga Eritrea mudo 20-sano kadib.